Abaluphahleka - Henan yamalahle Ucwaningo Keming Mechanical Co., Ltd.
imisebenzi Plasterer sika
Ngokuvamile inkontileka uye walungiselela kakade yonke amasaka Gypsum usimende latawudzingeka ezidingekayo, kanye nanoma yikuphi ukuphakelwa sangaphandle amanzi uma indlu ayikahlanganiswa axhunyiwe. Amatilosi abaluphahleka idinga ukuletha amathuluzi abo futhi imishini futhi ngezinye izikhathi ukuphakela bead zabo.
Imisebenzi ukuthi plasterer ngokuvamile kulindeleke ukufeza.
I plasterer ngokuvamile kufanele okuyisisekelo lokuqala noma tack Cornerbead ungene nganoma imuphi ophumile (zangaphandle) ekhoneni ingaphakathi endlini. Ukunakekelwa uyiswa uqinisekise lokhu kwenza odongeni ukubukeka iqonde futhi ngaphezulu kuyikhono esweni kwanoma yini enye.
"Sobuhlalo" iza izitayela eziningi; Ezisukela Wire Mesh ungenye ukudla ukuze libe nzima ngokwengeziwe metal amamaki ezidinga kunqotshwa on ngezipikili. Izinhlobonhlobo Plastic futhi akhona.
I bead kumele alinganiswe futhi wasika yobukhulu; ukunakekelwa esithathwayo hhayi bend noma wafiphaza ke. Ezindaweni lapho abangaphezu koyedwa ekhoneni ihlangabezana; emaphethelweni uhlelo bead sika bafa engela kanye namathiphu 2 noma ngaphezulu ezibekwe eduze ndawonye njengoba evumelekile; Kwaze kwathinta inhliziyo bo kodwa hhayi ezedlulayo. I bead ihlanganiswa ngokuphelele ngodaka kanye lonke udonga kanye usimende futhi kukusiza ukuba uyibambe aqine. Umkhiqizo osuphelile amaqabunga odwa encane obala strip metal ngesikhathi protrusion yegumbi okuyinto Ufika embozwe lapho ugange ngesineke. Lokhu eshiya, iqonde ekhoneni ahlanzekile ukubukeka.
Indlela ehlukile kubonakala izindlu ezindala ukwakha ekhoneni oyindilinga noma bullnosed isebenzisa quirked lokhuni abasebenzi bead. Abasebenzi buhlalu, a dowel 1 intshi nge ngu 1/3 agunde ngemuva, isethwe ekhoneni wangaphandle joiner esizeni, nasezinsikeni Imigudu lokhuni setha ku ezinkulu isitini / ukuvimba, noma isimo izinkuni. Khonka is ngokuhamba kuze kube abasebenzi bead bese usika emuva endaweni kuya bead noma "quirked" ukugwema ebuthaka feather onqenqemeni lapho ukhonkolo ihlangabezana bead.
Bokwakha kuwumphumela wenqubo kuyinto 'V' encane isiteshi ezimise esetshenziswa vimbela futhi unike impumuzo udini ayizindunduma oyindilinga. Ukwakha ekhoneni lemva, ukulondoloza elingenamikhono (Browning) is lemva kuze kube abasebenzi buhlalu, ke kuwumphumela wenqubo yokuziphendukela iyasikwa ibe Esekelwa elingenamikhono kancane kunangendlela ubukhulu esiphelele. Lapho phezulu yokwenza lobu bugebengu elingenamikhono sisetshenziswa, futhi bead is skimmed ngokugcwele bese, usebenzisa onqenqemeni iqonde, le kuwumphumela wenqubo yokuziphendukela kabusha wahlabeka ukujula siphelile, ngokuvamile on cishe 45 degree engela phakathi bead. I kuwumphumela wenqubo yokuziphendukela ngeke fihla ekugcineni ufa elincane uyomenzela phakathi kwabasebenzi bead ayibhade.
I plasterer idinga ukugcwalisa ibhakede 5 engamalitha partway ngamanzi. Kule ebhakedeni yena kusekelwe trowel wakhe noma amathroweli izindawo kuwo amathuluzi ahlukahlukene.
Ngokuvamile a plasterer has eyodwa trowel ngoba "nokubeka" (inqubo yokufaka odakeni phezu kodonga).
Abanye-ke ukugcina i trowel amadala ukuthi unesikhathi goba ehloniphekile kuwo (banana ijika) ukuze usetshenziselwe injongo "texturing"; uma ebizwa ngoba ngokuhlunama wayenomuzi. A abavamile-ku trowel ivame ukuba flat kakhulu kule kanye cleaner kubangelwa amanzi ongaqhoshisa ke odongeni, okwamphoqa ukuba likhiphe off kanjalo kufanele rework ndawo.
Ekugcineni, omunye angase abe brand trowel entsha "nokho zephula-e" azolibhubhisa esetshenziselwa "ukugaya"; lokhu lapho ukhonkolo cishe lukhuni futhi ukuthi asuse kokuphazamiseka noma ngokugcwalisa yimuphi ofaka ezincane (cat ubhekene) ukuze nenze udonga ibukeke ishidi iyunifomu ecwebezelayo usimende emhlophe.
Plasterers Iningi ntandokazi yabo ubukhulu trowel abawasebenzisayo. abanye uliphakamisela amathroweli bungangobubanzi 20 amayintshi eside kodwa kuyinsakavukela Kubonakala sengathi 16 "× 5". Ekusebenzelaneni yami sha encomekayo kuyinto Marshalltown insimbi engagqwali. Banezinhliziyo ayebuthaka brassy kubo, isibambo iraba futhi ngeke uqhatha noma ukugqwala uma ngephutha kwesokunxele emanzini ngobusuku obubodwa ngenkathi abanye bakhetha a njalo ukweba trowel edinga ukugcinwa ngaphezulu kodwa ihlala u-Adalberto isikhathi eside kanye pitting ongasinika yona a " luma "esisiza lapho" kokuqeda "(pass zokugcina lapho ukhonkolo seliya ngomutsha).
Ebhakedeni futhi uya ibhulashi enkulu esetshenziswa zingena amanzi phezu kodonga futhi ukuhlanza amathuluzi akhe, ibhulashi upende ukuze emakhoneni bushelelezi, nenyoni ekhoneni tekwakha emakhoneni (nakuba abaningi isabelo esisodwa inyoni omuhle ukugcina egumbini obunobunye).
Lezi amabhakede thuluzi waqale wabagcina eduze kwetafula ukuxuba bese njengoba olukhonkiwe iqala ukusetha sishukumiseleka eduze udonga ukuthi asesetshenzwa ku. Isikhathi iba indima enkulu lapha njengoba kanye olukhonkiwe iqala lukhuni (isethi) oyokwenza ngakho angabacwasi ngokushesha kanye plasterer has nesilinganiso elincane iphutha ukuze uthole odongeni bushelelezi.
Ungene etafuleni kuhlangana the plasterer ngokuvamile usetha "hawk" yakhe ngakho-ke kuyoba Ukugunda lapho kudingeka ubambe it ukugcina ukungcola off ngakho. Noma yimuphi doti e olukhonkiwe bangaba uyisicefe ezinkulu.
Khonka eziqongweni noma phansi?
Plasterers ngokuvamile uhlukanise ikamelo, (ikakhulukazi udonga esikhulu noma ephezulu ceilinged) ku phezulu kanye phansi. Lowo ukusebenza phezu uzokwenza kusukela onqenqemeni ophahleni ukuze mayelana isisu ukuphakama futhi asebenze akhokhe ikesi ubisi i-8-foot (2.4 m) ophahleni noma asebenze akhokhe kwezingodo ngamagumbi 12-foot-okusezingeni eliphezulu. Ukuze lombhishobhi ophahleni noma ezindongeni eziphakeme kakhulu, isiteji isethiwe futhi omunye usebenza topside, nabanye okunye ngezansi.
Hlanza ngaphambi kokuba baqede umsebenzi
Ngokuvamile kwenziwe nge isisebenzi. Ayikho globs usimende kushiywe phansi, izindonga noma ekhoneni bead emaphethelweni. (Azobonakala uma ngesineke futhi ziphazamise flooring futhi Ukunquma). Susa noma ngobunono beka konke kudoti.
Zonke amakamelo nezindonga zihlolwe for ngokuhlaziya futhi nezakhamuzi noma imihuzuko okungenzeka ukuthi kubangelwa kwabanye ashayisane izindonga. Babuye zihlolwe ukuze uqinisekise akukho uhlevane ashiywa izindonga kakhonkolo noma amanzi yanqamula. Zonke amakamelo ihlolwe ukuze uqiniseke ukuthi wonke usimende is akhishwe Izitolo ngakho ngogesi ungafaka enethiwekhi futhi ukuze uqinisekise akukho amathuluzi Kusala. Lokhu kushiya izindonga lilungele abadwebi kanye finishers ukuza ukwenza umsebenzi wabo wezandla.
amasu abaluphahleka Interior
Umnikazi ekhaya kanye nomqashi le plasterer sika ngokuvamile unquma kusengaphambili ukuthi yini izitayela bazosebenzisa endlini. Ngokuvamile Izindonga lwangaphakathi olubushelelezi futhi ngezinye izikhathi. Ngokuvamile wayenomuzi bancamela ukuthi kube Uphahla lwangaphakathi sebenzisa "ukuthungwa" inqubo njengoba kuba lula, ngokushesha, futhi ngaleyo ndlela ezishibhile ophahleni bushelelezi.
Izingcaphuno plasterer amanani esekelwe amasu okumele asetshenziswe futhi izinyawo ibhodi kumele yentiwe ukuze inkontileka noma wayenomuzi ngaphambi kokuthi kuqale umsebenzi. Izinyawo isiyenezelwe sitholwe iziphanyeko noma elilinganiswe ongusonkontileka omncane ongaphansi kukasonkontileka ikhanda ngokubala wallboards ukuthi beze ku-umkhakha esezingeni 8 'kuya ku-12' eside. Ube esenezela e yezindleko ezinkulu ngoba soffits futhi lombhishobhi Uphahla lwangaphakathi.
Ceiling lesibili noma lokuqala
Ngokuvamile uma uphahla kuyinto ukuze abe bushelelezi kwenziwa kuqala, ngaphambi izindonga. Uma-ke kumele textured, kwenziwa emva izindonga.
Isizathu salokhu wukuthi njalo uma senza nophahla lwangaphakathi ngawo asesetshenzwa ku usimende ziyokuwa yeduna ungene izindonga. Nokho ukuxuba ukuthungwa ayidingi ukuba esehlelembe uma iqala ukusetha:
Ngakho cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi njenge "Cream of tartar" noma ushukela ingasetshenziswa isikhathi isikhathi kulungiselelwa, futhi kalula wayokhuhla off izindonga.
futhi njengoba isikhathi singekho Ukulawula wesici ophahleni textured ukuxuba enkulu, noma emuva-kuya-emuva amamiksi kungenziwa futhi zonke Uphahla lwangaphakathi ehlanganiswa ngesikhathi esifanayo.
esinye isizathu wukuthi inyoni ngokuvamile ukusebenzisa kanye ekhoneni eliphezulu ngemva kokwenza ophahleni bushelelezi ke kulula ukugcina lokhu onqenqemeni ngokwenza odongeni zokugcina. Kodwa senza nophahla lwangaphakathi ngawo textured ngokuvamile akudingeki ukuba birded, kuphela ezihlangene nge ezimanzi kakhulu Ibhulashi lokupenda. Kulokhu odongeni kwenziwa kuqala futhi ekhoneni kwamiswa inyoni.
Into kuqala plasterer ivame ukuba ukwenze iye ngaphezu kwalo lonke ezinkulu anezikhala-aqoshiwe izindonga isizakubetha ukumboza; endaweni swatch mncane kakhulu. I wallboard udonsela umswakama aphume lokhu strip ngakho lapho plasterer iya phezu kwalo futhi uma wenza lonke udonga ngeke ashiye i umphetho sihlehliswe elidinga kabusha kwakhono lika olwengeziwe.
Wabe igcwalisa endaweni eduze ophahleni ngakho ngeke kuzodingeka ngelule ukuze uwufinyelele phakathi lonke udonga; Yena yakha ekhoneni nge inyoni yakhe. Lokhu kusindisa kwakudingeka isikhathi njengoba le nqubo kuyinto umjaho ngokumelene ukusabela zamakhemikhali.
Kusuka etafuleni ukuxuba i-plasterer akhe abanye "nasodakeni" ungene maphakathi hawk yakhe trowel wakhe. Sibambe hawk e off-isandla sakhe trowel lakhe yakhe sabaqalayo plasterer ke akhe roll bulging we usimende ungene trowel wakhe. lokhu kuthatha kancane umkhuba enkosini, ikakhulukazi nge amamiksi soupy.
Khona-ke ubambe parallel trowel odongeni engela kancane esihlakaleni uzama nombala Roll usimende phezu kodonga. Ngendlela efanayo kumuntu squeegee. Yena uqala ube amasentimitha ngenhla phansi futhi isebenza ngendlela yakhe phezulu ophahleni. Ukunakekela esithathwayo zifane ngangokunokwenzeka njengoba kukusiza esigabeni aliqede.
Kuye isikhathi sokushona usimende. uma umswakama siqala usimende ukudonselwa yibhodi pass yesibili yenziwe. lokhu kubizwa ngokuthi ongqongqozayo phansi. ke sifana nokusebenzisa upende nge roller e esihlakaleni isinyathelo futhi injongo. ukuze ulolonge iyiphi imigqa ugcwalise iyiphi voids ezinkulu eyokwenza umsebenzi owengeziwe kanye olukhonkiwe iqala ukusetha ngempela. ingcindezi kancane kakhulu sisetshenziswa kanye trowel kugcinwa owendlalekile maqondana odongeni.
Ngezinye izikhathi i accelerant niyozenezelelwa ukuxuba khawuleza ukubambezeleka kwesikhathi kusukela kokuqala kuhlangana esigabeni lapho olukhonkiwe iqala ukusetha. Lokhu kuvame ukwenziwa ezinsukwini ezibandayo uma Ukulungiselelwa imisiwe noma imisebenzi ezincane ukunciphisa ukulinda.
Uma olukhonkiwe usodongeni futhi iqala ukusetha (lokhu kungenziwa kunqunywa ithebula elikhulula lokuqala), i-plasterer gingerly sprinkles amanzi phezu kodonga; lokhu kusiza sekumiswe ukulungiselelwa kanye nokudala ukushelela. Wabe isebenzisa trowel wakhe futhi ngokuvamile wetted wazizwa ibhulashi agcinwe kule isandla obuhlukile futhi kancane lathinta odongeni phambili we trowel ukusebenza lesi siliphu kunoma iyiphi izikhala ezincane (eyaziwa ngokuthi "catfaces") e olukhonkiwe kanye bushelelezi out emangelengele walala-futhi cabaza iyiphi Bubbles emoyeni ukuthi imiswe phakathi ukubeka.
Lena sikhathi esibucayi ngoba uma odongeni kuba lukhuni kakhulu ke kucishe kungenzeki ukuba ugcwalise noma yiziphi izikhala njengoba ukushelela ngeke zisaba yona odongeni esikhundleni nje owomile fall out. Lokhu kuholela isidingo nalokho okubizwa ngokuthi "ukugaya" njengoba Yena kumelwe aqhubeke phezu kodonga kanzima ngokuphindaphindiwe uzama ukulolonga odongeni lukhuni futhi iyiphi catfaces ezinkulu kumele ligcwaliswe nge-putty nentaba, kwakwakhe ngokuhlanganyela, noma reworked ngokuxubanisa ngendlela fresh, elingenamikhono mncane.
Udonga siphelile uyobheka ecwebezelayo kanye nombala flat futhi bushelelezi uma uyithinta. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa ama-ke iyoba ekhumuzelayo mhlophe futhi lingatholakala zaveza phezu.
Kusukela ngesikhathi okwaphuma ngaso izikhwama kuthiwa walahla ku emgqonyeni lapho udonga isethwe ngokuphelele libizwa ukuxuba. Ukushintshashintsha ku inqubo nokuthi ingabe accelerant noma cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi sengezwe, ukuxuba ngokuvamile ihlala cishe amahora amabili.
Izikhathi zokugcina kuyizinto bebangalasa kakhulu uma abushelelezi noma uma ukuxubana usetha kusheshe esikhulu kunalokho obekucatshangwa. Uma lokhu kwenzeka kuthiwa ukuxubana uye "kubhoka" futhi ngokuvamile ngenxa usebenzisa umkhiqizo ubudala noma izinhlobo ezahlukene sezulu (onakaliswa umswakama noma kushisa izinsuku kungabangela usimende ukusetha kusheshe). Amamiksi Ngokuvamile abathathu noma abane kuphela zenziwa ngosuku njengoba abaluphahleka kuyinto lwasituba hhayi njengoba ngempumelelo ngaphansi ukukhanyisa ezingezona ezemvelo ezinyangeni nge kuhlwa ekuseni.
abaluphahleka kwenziwa unyaka wonke kodwa kungase kuqubuke izinkinga eyingqayizivele nangenkathi yonyaka. Ehlobo, ukushisa kubangela ukuba olukhonkiwe ukusetha ngokushesha. Olukhonkiwe futhi uphehla ukushisa ayo kanye nezindlu bangaba ngempela tshwala. Ngokuvamile crew usimende izozama ayafika endlini kahle entathakusa.
Ngo nezinyanga zasebusika, izinsuku iDemo kubangele isidingo kukhanyiswe yikona. Ngezinye engeli ezithile lezi izibani engenza ngisho abushelelezi odongeni ibukeke kobuso inyanga. Enye utalatiya zasebusika is kokudinga ukusebenzisa le jet heater (okungaba ibala olukhonkiwe aphuzi kodwa musa kungenjalo ubuhlungu ke), hhayi nje ukugcina plasterers efudumele kodwa futhi uvimbela amanzi e ukuxubana kusuka zeqhwa futhi odala ice zinhlayiya phambi usimende has isikhathi ukusetha. Futhi uma hose amanzi is hhayi kahle akhanywa ngaphambi kokushiya ke kungaba iqhwa phezu ebusuku futhi wayeka ngokuphelele ekuseni.
Texturing is ngokuvamile zokugqoka, Uphahla lwangaphakathi futhi igalaji izindonga. [Ukulandisa ezidingekayo]
Ngokuvamile i-ejenti retarding sengezwe ukuxubana. lokhu ngokuvamile Cream of Tartar (noma "Dope" e ijagoni le plasterer) futhi ukunakekelwa kufanele kuthathwe kanye lemali wanezela. Omningi futhi ukuxubana kungase lingashoni nhlobo. Nokho lemali esetshenziswa ngokuvamile elilinganisiwe; ngendlela eyodwa unezela udwi of usawoti iresiphi. ungeza Ketha elincane retarder, sincike Usayizi ukuxubana. Cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi sengezwe ukuze amamiksi emikhulu zingenziwa, kusukela inqubo ukuthungwa ayidingi umuntu ukulinda kuze kube yilapho uqala ukuba bazibeke phambi ukusebenza kwalo.
I abavamile-ku isigaba kuyafana bushelelezi kodwa wanezela ijazi mkhulu. Uma elingenamikhono ivuliwe nombala le plasterer ke uya emuva izinyoni emakhoneni yakhe. Ukuhlala kude ekhoneni wabe uthola trowel ne nice banana ijika kulo bese eqala ukusebenzisa phezu ogangeni, sibalo eziyisishiyagalombili noma ESS iphethini, siqiniseke ukuwela zonke izindawo ngesikhathi esisodwa. Uyanezela a usimende okuncane ukuze trowel wakhe uma kudingeka. Ekugcineni kube nomphumela zamatshe swaths upende-like phezu yonke ophahleni noma obondeni. Angaba khona-ke nje uhambe wasiqashisa setha ne zinakekelwe hhayi kakhulu otshiya globs futhi ukuze uqiniseke ukuthi emakhoneni bheka bushelelezi futhi komugqa.
Uma kunodonga ukuze abe bushelelezi futhi ophahleni textured, ngokuvamile odongeni kwenziwa kuqala, bese ophahleni emva odongeni umise. Esikhundleni rebirding ophahleni (okuyinto ngabe kwenziwa lapho udonga sabekwa phezu), a trowel ehlanzekile Kunenkolelo emdulini, ekhoneni yayo igijime ophahleni ukuze "baliqume" nokuhlanza odongeni ngesikhathi esifanayo. Lo mugqa ke eshelelayo nge paintbrush ukwenza letingamange tibe netihibe.
Izipanji (ngobuchwepheshe ngokuthi i iflothi), has a ifomu kumbuthano futhi ebusweni anolaka. ke eqondiswa a Esekelwa nge handhold emaphakathi futhi icishe nenkundla trowel ejwayelekile. Sponge yindlela okufana ukuthungwa futhi wasebenzisa ngokuvamile ophahleni futhi ngezinye izikhathi e zokugqoka. Ngokuvamile uma usebenzisa isiponji; isihlabathi yengezwe ukuxuba kanye nqubo ibizwa ngokuthi esihlabathini-sponge.
Kufanele kuqashelwe uma kukhishwa Kwakungafanele ume ngqo ngaphansi trowel yakho uma wenza lokhu njengoba kuba kakhulu, kubuhlungu ngempela, futhi iyingozi ukuthola uhlamvu lwenhlabathi olusesweni lakho; okuyinto wawuhlanganisa yi ukucasuka lime kanye. Le nhlanganisela kalula bhala iso.
Ukuxubana abavamile-futhi iyafana ne texturing avamile. Nokho ngemva iyunifomu kanye elingenamikhono bushelelezi ibekwe ophahleni futhi emaphethelweni zinqunywa; isiponji ekhethekile unxande nge isibambo is ziqalisa efika ophahleni iminyakazo agqagqene futhi isiyingi. Lokhu kuthatha abanye amakhono futhi abenza ukwenza kahle.
Ukubukeka jikelele kuyinto fishscale uhlobo iphethini ophahleni, closet udonga, njll Nakuba retarder is okuvame ukusetshenziswa; ukunakekelwa kufanele kuthathwe ukuhlanza isipanji kahle lapho usuqedile njengomphangi iyiphi abaluphalileyo Uqinisa ngaphakathi ke ngeke ukususa.
kwezingodo kaningi ziyadingeka ukuze usimende Uphahla lwangaphakathi kakhulu futhi ngokuvamile nzima walala-futhi asebenze kuka izindonga. Ukuze Uphahla lwangaphakathi iDemo eyodwa futhi basebenzisane ubisi ikesi. Nobunzima ukusebenza sibheke phansi Imvama usimende amabhomu splattering zesitezi, izindonga nabantu ngezansi.
Yingakho lwangaphakathi olubushelelezi, ezisebenzisa kungekho cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi futhi ngezinye izikhathi ngisho accelerant, zenziwa phambi kwezindonga. Usimende Retarded kungabonakala kalula wayokhuhla off esibushelelezi usimende udonga lapho ezimanzi. Noma yimuphi Splatters kusukela ophahleni bushelelezi kungabonakala kalula wayokhuhla off blueboard angenalutho kodwa hhayi kusukela odongeni kakade lemva. Kufanele kuqashelwe uma kukhishwa uma ime ngaphansi trowel yakho noma enye plasterer.
Ubunzima jikelele ukusebenza ophahleni bushelelezi fetches intengo ephakeme. Le nqubo kuyafana udonga bushelelezi kodwa engela engeyinhle ngenxa plasterer.